नियमित सेक्स गर्नुको यस्ता छन् फाईदा ! – Gandak News
नियमित सेक्स गर्नुको यस्ता छन् फाईदा !
गण्डकन्यूज द्वारा २४ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार १९:०७ मा प्रकाशित 0
काठमाडौं । हाम्रो समाजमा यौनका कुरा गर्न त्यति सहज छैन । र पनि यो धुर्व सत्यनै भन्नु पर्छ यौन सवै मानिसको लागि प्राय आवश्यक छ । मानिसहरु यौन सम्पर्क केवल आनन्द लिनका लागि गरिने ठान्छन् । तर धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ यौन सम्पर्क गर्दा विभिन्न रोगबाट समेत मुक्ति पाइन्छ अर्थात् फाइदा हुन्छ ।
मोटोपनः मोटोपनको समस्यामा परेकाहरुलाई पनि नियमित सेक्स राम्रो मानिएको छ । कुनै पनि कसरत गर्नु भन्दा नियमित सेक्स मोटोपन घटाउन सहजसिद्ध हुने शोधकर्ताहरुको भनाइ छ ।